Pep Guardiola Oo Daawan doona kulanka Caawa ee Barcelona vs Man City
HomeChampions LeaguePep Guardiola Oo Daawan doona kulanka Caawa ee Barcelona vs Man City
Pellegrini ayaa dareemi doona xumadda dagaalka loogu jiro booskiisa iyo in uu shaqadiisa waayi doono xagaaga haddii uu ku guul darraysto in uu ciyaarta caawa u soo saaro kooxdiisa wareegga Quarter Final-ka ee Champions League.
Lugtii hore ee dhex martay labada kooxood ee Manchester City iyo Barcelona eek a dhacay garoonka Etihad Emirates ayaa ku dhamaaday 2-1 ay ku badisay Barca, waxaana laga rabaa City in ay caawa ku badiso ugu yaraan 2-0 taas oo marka la eego xaaladda kooxda ay la ciyaarayso ku adkaan doonta.
Guardiola ayaa ka mid ah saddex tababare oo ay hoosta ka calaamadsatay, waxaana weheliya Diego Simeone iyo Carlo Ancelotti oo naadigan lacagta badan haystaa uu doonayo in ay kooxda u horseedaan inay ku guuleysato Champions League.
Caawa waxay noqon doontaa maalintii ugu horreysay eee uu Guardiola dib ugu soo noqdo Barcelona isaga oo daawanaya ciyaar dhex maraysa koox kale, waxaana uu si fiican u eegi doonaa gol-daloolooyinka labadan kooxood oo ay suurtogal tahay in midkooda soo baxa ay isku dhacaan Bayern Munich marka Jimcaha la sameeyo jadwalka kooxaha isku dhici doona wareegga Quarter Final-ka.
Daawashada Guardiola ee kulankan caawa ayaa waxa kale oo uu sii kordhinayaa hadal haynta ah in uu khabiirkan guulaha badan u horseeday Bayern Munich iyo Barcelona.
Guardiola ayyaa intii u dhaxaysay sannadihii 2008 illaa 2012 waxa uu tababare ka ahaa Barcelona, taas oo uu u qaaday 14 koob.
Bristol City 0-3 Derby County – All Highlights and Goals
Kooxaha Kubadda Cagta Heerka Koowaad ee Caasimadda Oo Labadii Bilood ee ugu Dambeeyay ku Jiray Tababar Joogto ah & Tartan lagu War- geliyay oo aan ilaa Hadda Wax War ah laga Hayn.!